IGeofumadas ikumema ukuba wazi upapasho kwi-Intanethi kwi-port ye-IGN Spain! -Izixhobo zeGeofumadas
I-Geofumadas ikumema ukwazi i-intanethi kwimpapasho ye-IGN yaseSpain!
NgoNovemba, 2017 Iiphotography, Internet kunye neBlogs, Ukuprinta kokuqala
Ngaphambili: Ukusebenzisana nayo yonke into enxulumene nejografi kunye nokuphuhliswa kwebalazwe kwilizwe ngalinye kuye kwadala ukudala i-arhente karhulumente enoxanduva lo msebenzi obalulekileyo. Kwezinye iimeko zixhomekeke kwiSebe lezoKhuseleko okanye elinye ngokubhekisele kwitekto yangaphakathi yelizwe ngalinye, olu hlobo lesikhungo lunokuthatha amagama ahlukeneyo. Ngoko sinayo Military Geographic Institute(IGM) e-Ecuador okanye National Geographic Institute kumazwe afana neSpain, iGuatemala okanye iPeru. Abanye, njengaseArgentina, bazalwa njenge-IGM kwaye kamva baba IGN. Kodwa, ngaphandle kokuthatha inxaxheba kolawulo lwasemkhosini okanye olwasemkhosini, imisebenzi yasekuqaleni iyafana.
Nangona ininzi yale mibutho kwizinga lamazwe linama-portal ye-intanethi, bambalwa kakhulu kubo benza ukuba luncedo, ulwazi oluphezulu noluncedo kuluntu. ngaphezu kwazo zonke mahhala.
Kungenxa yoko, namhlanje siyancoma ukwenza ukhenketho oluthile ukuze ukwazi ezinye zezinto eziphathekayo IGN Spain yenza ukuba kubakho abasebenzisi be-intanethi. Ukutyelela apho, usebenzisa uhlobo lomnxeba-metaverse esiya kuthiwa Ibero yethu entsha avatar (umfanekiso ongakwesokudla), siza kutyelela ezo ndawo ezenza umdla kwaye sithemba, zisishukumisele ukuba kuphandwe uphando olunzulu. Ngaba uhamba nathi?
Ukungena Ibero kufuneka sihambe ngesithuba kwaye sizibeke eMadrid, eSpain. Ngokukodwa kwi-Calle Gral.Ibáñez de Ibero, 3 28003. Yiyo loo nto silungelelanise amabhanti ethu okuhamba, sahamba. Uhambo luyakhawuleza kwaye kwimizuzwana embalwa kamva siyayibona indawo.
Safika sikhuselekile. Sihla kwaye singqongwe siseti yezakhiwo ezinemibala yezitena. Iivolumu eziphumayo nezingenayo. Iifestile ezincinci ezinesakhelo esimhlophe esizalisa iseti. Siqhubela phambili kwipatio ephambili kwaye siphambi komnyango wokungena. Singena. Siza nenjongo echaziweyo, ke ngoko, emva kwemvume ezihambelanayo esiya kwindawo yoPapasho. Basixelela ukuba kukho indlela ekhawulezayo nengqalileyo yokufika apho. Siyasamkela isiphakamiso kwaye ingqalelo yethu ngoku ijolise ekufumaneni indlela emfutshane. Ukuba sisebenzise 'imephu yesiqhelo' enikezwe uluntu siya kufika ngale ndlela:
Ukubonisa ulwazi olugcinwe
Ngokukulindela okukhulu siye kwiindawo ezikhethiweyo kwaye emva kokuwela i-corridor, sifumane iingcango ezintathu, ngamnye ngomqondiso wokubonisa. Kufuneka sikhethe ukuba ngubani oza kuqala ngawo. Siqala enye ngakwesobunxele:
a) Umnyango weencwadi
Siphambi kwesikhephelo esandisa ubungakanani bemilinganiselo yayo rhoqo rhoqo. Iikopi ziboniswa ngale ndlela:
Okwangoku le ndawo inayo Iikopi ze28 Ziyakwazi ukufundwa nokukhutshelwa ngaphandle kweefomati ezahlukeneyo.
IQhinga lokuQala: Njengoko izihloko zibandakanya iindawo ezahlukeneyo kunye neminqweno, sinokucinga ukuba inokuba luncedo udidi iikopi ezinikeziweyo, oku njengoncedo lokuququzelela uphando:
Uhlalutyo kunye neendaba Ingxaki, ubumbano kunye nokungalingani kwezentlalo kunye nendawo eSpain
ICartographic Abazobi beemaphu zaseSpain
Imbali yoqikelelo lweemaphu
· Imizobo yokuHlala koMhlaba eSpain. Iprojekthi ye-SIOSE.
Geodesy ne Astronomy Imibuzo ngeenkwenkwezi
Umlinganiselo womhlaba phakathi kuka-1816 no-1855
Imbali · Uphando ngeplopographic-Parcel yeGeneral Statistics Board kumasipala waseAlmería (1867-1868)
· Uphando malunga nePropographic-Parcel yeGeneral Statistics Board kuMasipala waseSoria (1867-1869)
I-Urban Planimetry yaseGranada equlunqwe yi-General Statistical Board (1867-1868): iprojekthi engagqitywanga
· Iiprojekthi zeKhathuni eziKhulu zeSizwe zenkulungwane ye-XNUMX. Umelo lwommandla oseCastilla y León
Iimephu kunye nabazobi beemephu kwimfazwe yamakhaya yaseSpain (1936-1939)
· Inkqubo yeplanethi yaseMadrid ngenkulungwane yeXIX
Imbali yokuCandwa kweMida ye-Hispano-French: Ukusuka kwiSivumelwano sePyrenees (1659) ukuya kwizivumelwano zeBayonne (1856-1868)
Ezahlukeneyo Amabali oPhando loMhlaba
Uhambo oluya eSierra de Segura
Ukusuka elwandle ukuya kwiVenus
Imigaqo Isikhokelo seMigangatho
Iprofayile yaseLatin American yeLAMP Metadata Version 2
Ukuxhamla · Ithiyori malunga nokwanda kwamaza enyikima. Amaza eLg
Ukuhlaziywa kweemephu ezinobungozi zenyikima yaseSpain 2012
I-IDEE - Iinkcukacha zoLwazi lweZiseko INgqungquthela ye-III ye-Iberia malunga neZiseko zoLwazi lweDatha (2012)
INgqungquthela ye-IV ye-Iberia kwiZiseko zoLwazi lweDatha (ngo-2013)
Intshayelelo kulwakhiwo lwedatha yendawo
I-IDEE yebhlog, iposti ye1000
· Izinto ezisisiseko kulwakhiwo lweDatha yendawo
Toponymy Izikhokelo ezisetyenziselwa ukusetyenziswa kwamanye amazwe kwiimephu zabapapashi kunye nolunye upapasho
· IToponymy: IMigangatho yeMTN25. Iingqiqo ezisisiseko kunye nesigama
Umthamo ngamnye unefayile yekhathalogu enxulumene noko esibonelela ngenkcazo emfutshane yomxholo wayo kunye neenkcukacha ezinje ngoMlobi, uMhla woHlelo kunye nenani lamaphepha. Nje ukuba isihloko sikhethwe, sifumanisa iifomathi ezikhoyo kwaye sifumane "ikopi " yalo Elula, akunjalo?
Iphulo lesibini: Masithathe naziphi na iincwadi ezimbini ukubeka izimvo kwiimpendulo zethu. Siyazi kakuhle uthando lwethu lwamaphuphu ukuze ukhetho lwethu lokuqala aluyikumangalela kuwe. Ukhetho lwesibini luhlobene namava omsebenzi wethu. Makhe sibone:
Ihlabathi leMephu Kubonakala ngokufunda nokuqonda okulula. Ukuba sijonge i-index jikelele, siyabona isakhiwo sezinto eziqulethwe kakuhle ngokubhaliweyo. Efanelekileyo njengombhalo wesalathisi kubaQala kwaye uqala. Ngokuqinisekileyo kucetyiswa. Phakamisa.
Iindaba zomcebisi-ntsimi efumaneka kwinqanaba edibeneyo, le ncwadi yokuzonwabisa inokuzonwabisa inokusinika ixesha elimnandi kwaye ngokuqinisekileyo liya kusenza sikhumbule amabali ahlalayo okanye awamva kusebenza nabo. Kwaye nangona sixwayiswa ukuba singawa ukuzinyameka, ukufunda okunje kungasinceda sihlale ngexesha lethu lokuzonwabisa. Phakamisa ukuthanda le ncwadi.
b) i-Door Bulletins
Ii-Bulletins ze-IGN kunye ne-CNIG zenzelwe ukusabalalisa imisebenzi yeziko. Ifumaneka ngefomathi yePD, ukugqibela okupapashwe kususela ngenyanga NgoSeptemba. Njengoko kulindelwe, unako ukufikelela kwiinombolo zangaphambili nje ngokukhetha unyaka kwaye emva kwenyanga yeendaba ezifunwayo.
c) Umnyango weNcwadi
Sibhekene nomnyango wokugqibela wezotyelelo lwethu olubonakalayo. Siphumula isikhashana ngaphambi kokuqhubeka. Zibonisa ukuba kweli gumbi lokugqibela kukho ulwazi oluninzi. Makhe sihlole Sifaka Siphambi kwamagumbi amane. Masiqale:
c-1) Imisebenzi Yengxelo. Ukuba ufuna ukufumana ingxelo yonyaka yemisebenzi eyenziwa yi-IGN kunye ne-CNIG, le yindawo efanelekileyo. Siyacela malunga nale nto kwaye zibonisa ukuba umhla wokugqibela weedethi ukusuka ngonyaka we-2015.
c-2) Ushicilelo kunye ne-Seismic Bulletins. Ngokuqinisekileyo yindawo equlethe inkcazelo engakumbi. Abaphandi be-geofumed baya kuvuya apha ngaphandle kokungabaza. Kudinga "ukucwiliswa okujulileyo" kumxholo weesinele (4) ezahlukeneyo.
Iingxelo kunye nezinye iincwadi
Izifundo zeentshukumo zomhlaba
Njengomboniso omncinci, sikuvumela ukuba uqaphele iziqulatho "Iingxelo kunye nezinye iincwadi"
c-3) Iinjineli zendawo: Iprogram eyintloko kunye neBhayibhile (unyaka 2008). Lo mmandla uqulethe isilabhasi esisiseko kunye nesibrarifa esinconywayo ukwenzela ukukunceda ekulungiseleleni ukufumana izichaso njengeNjineli yeGeographical. Ukuphonononga i-Bibliography unokufumana ukufikelela kumaxwebhu ahlukeneyo epapashwe kwi-Intanethi. Abo banqwenela ukuphonononga iingcamango bayamenywa ukuba bahlaziywe ngokupheleleyo:
c-4) Amakhalenda. Ngaba ufuna ukufumana ikhalenda yonyaka ozayo kunye neefowuni zesikhangiso? Ewe, i-IGN inikezela enye njengesikhumbuzo sokutyelela kwakho. Siyabulela kakhulu kwaye sicebisa: Thatha ithuba!
Kuye uhambo olude, ngokungathandabuzekiyo, endleleni yokuphuma, bathetha ngokunyanisekileyo kwaye basimema ukuba sibuyele xa sifuna, esiyayixabisayo. Ngoku kufuneka sibuye size sishiye i-Ibero. Countdown Sibuyela ngaphandle kwesiganeko. Sithemba ukuba ufumene ityelelo enomdla kwaye ifundisa. Khumbula ukuba idilesi www.ign.es. Kude ithuba elitsha!
Post edlulileyo«Ngaphambilini INgqungquthela Yonyaka Yonyaka ye-Inter-American Cadastre kunye ne-Registry Network Network
Post Next Uyikhuphela njani i-AutoCAD 2018-inguqulelo yemfundoOkulandelayo »